Next Article Ugo Naijiria Awuchie na Brazil
Dịka ha na-emerị n'oge mbụ site n'ụbọchị egwuregwu ahụ bidoro, ndị egwu bọọlụ Naijiria ejighị ohere ha nwere were kpọrọ ihe nke ha kara iji gosi na ha bụ ọkaibe tupu egbuzuo bọọlụ, nkea mere ha jiri were isi ha were kwụọ ụgwọ ya na penariti dịka ha agaghị ebutezi ọlaedo dịka aha ha siri dị mana ga-azọzi ọla nchara.
Onye na-agba n'ihu, Wisdom Ubani, kwesịrị ime nke ọma site na ịgbanye ohere goolu abụọ o nwetara n'ọkara nke mbụ, mana dịka ọ na-akpụ ka ejule, ohere ndị a gafere. Guinea site n'aka Bah Algassime na Toure Momo tụfukwara ohere nke ha.
Dịka nkeji asaa gasịrị n'ọkara nke abụọ, Ubani gbafuru bọọlụ ọzọ nke bụ na nwanyị dị ime ga-abanye bọọlụ ahụ n'ọnụ goolu. Dịka ọ na-eme otú awa, Algassime nọrọ ebe tere aka were gbaa shọtụ oche goolu Sunday Stephen chere, ebe bọọlụ nke Toure Alya kụrụ n'ọnụ goolu na nkeji nke iri isii na isii. Na nkeji nke iri asaa na abụọ, Ubani nwetara onwe ya ọmarịcha ohere mana ọ gbafukwara ya bụ bọọlụ.
Dịka ọ bụzi penariti ga-egosi onye meriri, Bangoura Alya, Toure Alya, Conte Aboubacar, Bangoura Sekou , Keita Ahmed , Bangoura Mahmoud , Bah Algassime, Fofana Ibrahima , Dado Ibrahima na Soumah Mohamed jiri nwayọọ gbakpunye penariti nke ha n'ọnụ goolu, ebe Ogaga Oduko gbafuru nke ya ka Ibraheem Jabaar , David Ishaya, Olakunle Olusegun , Clement Ikenna , Olatomi Olaniyan , Shedrack Tanko , Fawaz Abdullahi , Wisdom Ubani and Samson Tijani nyechara goolu nke ha.
Mpụtara a gosiri na Naijiria, bụ ndị nwetagoro akwụkwọ Iko Mba Ụwa nke Afọ Puku Abụọ na iri na iteghete maka Ụmụ Okorobịa na-erubeghị afọ iri na asaa na Brazil, ga-agba asọmpi nkasi obi ụbọchị Satọdee nke a ga-eji mara ndị bụ ndị nke atọ.